Moments leh saaxiibo 23
Maxay yihiin qodobbada muhiimka ah ee dunida dunidu ka duwan tahay ruuxa? Ereyadaas waxaa badanaa loo isticmaalaa buugaagta iyo majaladaha wax ka qabta mawduucyadan, adeegsigaani wuxuu u yahay inuu isku kalsoonaado maskaxda akhristaha.
"Adduunyada" adduunyada "iyo adduunyada dunidan" maahan ereyo isku mid ah. Looma isticmaali karo qofka yaqaan cilmiga. Dunida astral asal ahaan waa duni fikradeed. Dhexdeeda dhexdeeda adduunyada jireed iyo dhammaan waxqabadka jir ahaaneed ayaa la muujiyaa, gudaha astralka waxaa sidoo kale lagu muujiyaa fikradaha maskaxda maskaxda, iyo, adduunka maskaxda, fikradaha dunida ruuxiga ah. Dunida ruuxiga ahi waa meesha ay waxkasta lagu yaqaan inay yihiin, ma jiraan wax khiyaano ah oo lagu adeegsan karo kuwa ku nool gudaha. Dunida ruuxiga ahi waa dhabbaha uu qofku galo markuu galo, oo uusan helin jahwareer, laakiin wuxuu yaqaan oo waa la yaqaanaa. Astaamaha lagu garto ee labada adduun waa rabitaan iyo aqoon. Rabitaanku waa xoogga xukunka ee dunida xiddigta. Aqoontu waa mabda'a xukunka ee ruuxiga. Nolosha waxay degganaan karaan astaanka adduunka sida xayawaanku u dagan yihiin dunida jireed. Waxaa dhaqaajiya oo hagitaan rabitaan. Dadyowga kale waxay ku nool yihiin dunida ruuxiga ah oo waxaa ku dhaqaaqaya aqoon. In kasta oo qofku jahwareersan yahay oo aanu hubin wax aanu u baahnayn inuu ka fiirsado inuu yahay maskax ahaan maskax ahaan, inkasta oo ay macquul tahay inuu maskax ahaan leeyahay. Qofkii gali kara adduunyada ruuxiga ah ee aqoonta ma ahan xaalad maskaxeed oo aan hubin. Isaga kaliya ma doonayo inuu noqdo, ama ma maleysto, ama ma rumeeyo, ama uma maleynayo inuu yaqaan. Haddii uu yaqaan dunida ruuxiga ah waa aqoon isaga lala leeyahay ee maaha mala-awaal. Farqiga u dhexeeya adduunka xiddigta adduunka iyo adduunka ruuxiga ah waa farqiga u dhexeeya rabitaanka iyo aqoonta.
Miyuu jiraa xubin kasta oo jidhka ah oo ah hay'ad caqli-gal ah ama ma shaqeeyaa si toos ah?
Ma jiro xubin jirka ka mid ah oo caqli leh in kastoo xubin kasta ay miyir qabaan. Qaab dhismeedka dabiiciga ah ee adduunka oo dhan waa inuu noqdaa mid miyir qaba haddii uu leeyahay wax qabad shaqeynaya Hadeysan ka warqabin shaqadiisa ma aysan gudan karin. Laakiin xubin caqli ma leh haddii sirdoonka loola jeedo xarun maskaxeed. Sirdoonka waxaan uga jeednaa ahaansho qof ka sarreeya, laakiin aan hooseyn, oo ka hooseeya kan gobolka nin. Xubnaha jirka ma aha kuwo caqli badan, laakiin waxay ku dhaqmayaan hoos imaad sirdoon ah. Qeyb kasta oo ka mid ah jirka waxaa xukuma hay'ad ka warqabta shaqada gaar ah ee xubnaha. Shaqadan miyir-qabka ah xubnahu waxay sababtaa unugyada iyo molecule-yada iyo atamyada oo soo koobaya, si ay ugu biiriyaan shaqada shaqada jirka. Atom kasta oo gala galaaska loo yaqaan 'molecule' waxaa xukumaa qeybta miyirka leh ee molecule. Walxaha kasta ee galaya unugga unugyada waxaa xakameeya saameynta ugu weyn ee unugyada. Unug kaste oo sameysma qaab dhismeedka unug waxaa hogaamiya unugyada miyirka ee jirka, unug walbana qeyb ka ah qeybta jirka waxaa xukuma isuduwaha mihiimka ah ee jirka kaasoo xukuma aasaaska jirka guud ahaan. Atom, molikula, unug, xubin waa midwalba midwalbaa ku sugan hadba siduu udhaqmayo. Laakiin labadan midkoodna lama dhihi karo inuu caqli leeyahay inkasta oo ay shaqadooda ku qabtaan shaqooyinkooda kaladuwan iyagoo si sax ah u shaqaynaya.
Haddii xubin kasta ama qeyb ka mid ah jireed oo maskaxda ku matala, markaa maxaa sabab u ah qof aan bini'aad ahayn oo aan lumin isticmaalka jirkiisa marka uu lumiyo isticmaalka maskaxdiisa?
Maskaxdu waxay leedahay toddobo shaqo, laakiin jirku wuxuu leeyahay tiro badan oo xubnaha ah. Sidaa darteed, xubin kasta ma matali karto ama matali karto hawl gaar ah oo maskaxda ka mid ah. Xubnaha jirka ayaa loo qeybin karaa fasallo badan. Qeybta koowaad waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la kala soocayo xubnaha kuwaas oo ah, sida waajibaadkooda ugu horreeya daryeelka iyo dhawrista jirka. Kuwaas waxaa ka mid ah xubnaha ugu horreeya ee ku hawlan dheef-shiidka iyo fikirka. Xubnahaan, sida caloosha, beerka, kelyaha iyo beeryarada waxay ku jiraan qaybta caloosha ee jirka. Waxaa ku xigta kuwa ku jira godka xiidmaha, wadnaha iyo sambabbada, oo la xidhiidha oksajiinta iyo nadiifinta dhiigga. Xubnahaani waxay u dhaqmaan si ikhtiyaari ah oo aan maskaxda ku xakameyn. Waxyaabaha ka mid ah xubnaha maskaxda ku xiran ugu horeyn waa jirka wadnaha iyo qanjidhada xiidmaha iyo xubnaha kale ee gudaha ee maskaxda. Qofka lumay adeegsiga maskaxdiisa ayaa, sida xaqiiqda ah, u muuqan doona markii la baarayo si ay u saameeyaan qaar ka mid ah xubnahaan. Waalidnimadu waxay u noqon kartaa mid ama sababo badan awgood. Mararka qaarkood sababaha degdegga ah waa jir ahaan oo keliya, ama waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay xaalad aan caadi ahayn oo xagga maskaxda ah, ama waalli ayaa laga yaabaa inay sabab u tahay maskaxda oo gabi ahaanba ka tagtay oo ka tagtay qofka. Wareer waxa sababi kara wax uun jir ahaaneed, sida cudur ka mid ah xubnaha gudaha ee maskaxda, ama xaalad aan caadi ahayn ama luminta qanjirka tayroodh. Haddii xubin ka mid ah xubnaha maskaxda ku xiran, ama maskaxdu ku shaqeyso jirka, ay lumiso ama ficilkooda uu farageliyo, markaa maskaxdu si toos ah uma ficnaan karto ama waxay u gudbin kartaa jidhka jirkeeda, in kastoo laga yaabo inay ku xirnaato . Maskaxdu markaa waxay la mid tahay liistada baaskiilka oo mashiinkiisu lumiyey santuuqyadiisa, in kastoo ay saaran tahay, isagu ma saari karo. Ama maskaxdu waxaa loo ekaysiiyaa fuulley faraskiisa ku xidhan, laakiin gacmihiisa iyo lugaha ay ku xidhan yihiin oo afkiisuna xanaaqsan yahay si uusan u hanan karin xayawaanka. Iyada oo ay ku xiran tahay xoogaa jacayl ama lumis xubin jirka ka mid ah oo maskaxdu ku shaqeyso ama xakameyso jirka, maskaxda ayaa laga yaabaa inay la xiriirto jirka laakiin ma awoodo inay hagto.